महिनावारी भएका बेला नखानुस् यी ५ कुरा - खबरमञ्च खबरमञ्च
2019/10/19, खबरमञ्च, at 2:10 PM
By खबर मञ्च / October 19, 2019 / Comments Off on महिनावारी भएका बेला नखानुस् यी ५ कुरा
एजेन्सी । युवती र महिलाहरूका लागि महिनावारी सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर यो समयमा शरीरमा हर्मोनमा परिवर्तनहरू आउने हुँदा यस्तो बेलामा आम अवस्थामा भन्दा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा मांशपेशी दुख्नेदेखि लिएर मानसिक रूपमा शरीर भारी हुने गर्दछ ।
महिनावारीका बेला सबैलाई उस्तै खालका समस्या आउँदैनन् तर धेरैजसो महिलाहरूले श्रावका बेला अनेकन् समस्या झेल्नैपर्छ । यस्तो अवस्थामा खानपानमा एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ । खानपान मान्छेको शरीर मनोविज्ञानसँग समेत जोडिएका हुनाले यस्तो बेलामा यी कुराहरू नखानुहोस् :
क. मासु : महिनावारीका बेला माछामाशु र अण्डाजन्य वस्तु नखानुस् । त्यसमाथि रातो मासु त खाँदै नखानुस् । रातो मासुमा भएको एसिडले प्रोस्टे ग्लैंण्डलाई क्रियाशील गराइदिन्छ, जसका कारण महिनावारीका बेला हुने दर्द झनै बढ्छ ।
ख. अमिलो : अमिलोजन्य खाने कुरापनि श्रावका बेला खानु अहितकर हुन्छ किनभने अमिलोजन्य पदार्थमा पर्याप्त सोडियमको मात्रा हुन्छ । उसो त नुन पनि पिरियडका बेला कम लिनु उचित हुन्छ । सोडियमले शरीररमा पीडा बढाउँछ ।
ग. चिल्लो खाना : महिनावारीका बेला हल्का खाना खानुहोस् । मसलेदार र तैलीय खानाले झनै दर्द बढाउँछ ।
घ. चियाकफी : चियाकफीमा पर्याप्त क्याफिन भन्ने तत्व हुन्छ जसले दिमागमा उत्तेजना पैदा गर्नेगर्छ र तपाईँलाई झनै चिड्चिडाहपन हुनसक्छ । चिया खानु नै छ भने यस्तो बेला वनस्पती चिया लिनु उचित हुन्छ ।
ङ.मदिरा : महिनावारीका बेला रक्सीजन्य पदार्थ लिनु गलत हुन्छ किनभने यसले मांशपेशीलाई तन्काउँछ र झनै पीडा बढ्छ ।
Last Modified: October 19, 2019 @ 2:12 pm